I-Flanged 96 al2o3 alumina tube ye-ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic > I-Flanged 96 al2o3 alumina tube ye-ceramic
I-Flanged 96 al2o3 alumina tube ye-ceramic
I-Model No.: JH.CT.008
Sinikeza ukukhethwa kwezinto ezihlukahlukene zokuqukethwe ze-alumina tube, njengama-96%, 99%, 99.5% no-99.7%. Ingafakwa ngomshini oshisayo, ucindezela owomile, isikhunta somjovo we-ceramic noma i-extrusion. Ukumiswa okuhlukahlukene okuyinkimbinkimbi yesikhumbi se-ceramic, njengokujikeleza, isikwele, isikhumba esiphunduzayo, i-hex, i-flanged, i-double-bores, i-tri-bores, i-tree-bores, nokunye okuphela kokuvuleka kuyatholakala kithi.
Sine-glazing yethu, umshini wokukhiqiza i-metallization. Phakathi naleso sikhathi, singakwazi ukufeza izidingo ezicacile kakhulu ngokubheka okuhle, ukuchithwa kwe-CNC.